Dhir - Gpedia, Your Encyclopedia
Dhir (Af Ingiriis : plant; Af carabi: نبات) sidoo kale loo yaqaano Dhirta Cagaaran waa noole ka samaysan unugyo badan oo isku xidhan taasi oo dulsaaran oogada sare ee dhulka. Dhirtu waa kalmada jamcisa dhamaan geedaha noocaydooda kala duwan ee laga helo carada dusheeda, biyaha dhexdooda, buuraha iyo meelo badan oo kala duwan. Waxa jira noocyo badan oo dhirta ah kuwaasi oo lagu qiyaaso in ay ka kooban yihiin ilaa 375,000 oo nooc. Guud ahaan dhirtu waxa ay ka kooban tahay qaar iniinyo leh (Seed plants) iyo qaar aan lahayn. Waxa kale oo ay ka kooban tahay qaar qodax leh iyo qayb aan qodax lahayn haba yaraatee. Qeybaha rasmiga ah ee dhirtu waa dhirta ubaxa leh (flowering plant), caleen-yare (carnifers), feerno, Lycopodiopsida, jirid-yare, algiya, caleenley iyo shurub. Dhirtu waxay ka mid tahay Nooleha. Sidoo kale, dhirtu waxay leedahay unugyo-dahaadhan (cellwalls) kuwaasi oo u suurta geliya ineey sameeysato cunto ayadoo isticmaaleysa ileyska qoraxda, biyo iyo kaarboon-labo-ogsajiin. Dhirtu waxay manaafacaad iyo faa'iido badan u leedahay dunidan aan ku noolnahay; waxay suurto-gelisaa in hawada ka soo saart kaarboonka isla markaana ku sii deeyso hawada Ogsajiin oo ah mida teegeerta nolosha xayawaanka iyo dadka. Intaas waxaa dheer in dhirtu soo saarto midho, caleemo, jirid iyo xidido kal duwan taasi oo ay quud iyo cunto ka dhigtaan dhamaan noolaha intiisa kale ee xayawaanka iyo dadku ka midka yihiin. Guud ahaan waxaa jira noocyo badan oo dhir ah; kuwaasi waxaa ka mid ah: beeraha, keymaha, iyo dhuldaaqsiimeedka. Maadaama juqraafiga dhulku kala duwan yahay, meelaha dhirtu ka baxdo aduunyada weey kala duwan tahay. Meelaha qaar waxaa ka baxa kumanaan nooc oo dhir ah, halka deegaanada qaar (sida saxareha ama lamadegaanka) ay ku yar tahay dhirtu. Maadaama noloshu ku tiirsan tahay dhirta waxaa waajib ah in la ilaaliyo jiritaanka, koritaanka iyo caafimaadka dhirta.
Dhirtu waa noolaha kali ah ee cuntadiisa diyaarsada ayagoo isticmaalaya nidaam loo yaqaano Habka Samayska Cuntada (photosynthesis). Geeduhu waxay u baahan yihiin ileys (inta badan ileyska dabiiciga ah ee qoraxda), biyo ay xididadu ka soo nuugaan dhulka iyo hawo - gaar ahaan kaarboon-labo-ogsaydh (C2O) si uu u samaysto cunto asagoo isticmaalaya Habka Samayska Cuntada. Inta u badan dhirta, habka samayska cuntada ee geedku wuxuu ka dhex dhacaa caleemaha iyo laamaha dhirta, halkaas oo biyaha, awooda ileyska iyo [[kaarboon|kaarboon-labo-ogsaydh]ku ku falgalaan. Isku dhiska halkaas ka dhaca waxaa ka soo baxa Ogsajiin hawo ah oo caleemuhu cirka ku sii daayaan. Taasi oo ah faa'iidada koowaad ee dhirtu u leedahay deegaanka dhulka.
inkastoo dhirtu u qaybsanto mid la aadanuhu cuno iyo mid uu anfacsado iyo mid uusan waxba ku falin ayaa hadana waxaa jira dhul loogu talo galay beerashada, dhulkaas ayaa ka bedelan kan kale, waxaa ku badan macdanta iyo nafaqada dhiri ku bixi karto, dhuldaaqsimeedka waxaa lagu gartaa carrada madow ee dhoobeeyda ah, badanaa waxaa ka ag dhow biyo mareenno sida wabiyada iyo togaga, ama waa meel godan oo biyo fariistaan xiliyada roobka,
dhirta lagu beerto ayaa leh xili la gurto,
Barashada cilmiga tirada, koritaanka, caafimaadka, isticmaalka iyo baaxada keymaha dhirta caalamka waxaa loo yaqaanaa Silvicultur. Dhirta dadku beeraan si looga sameeyo cunto, dhar, agabka dhismaha, qurux ahaan iyo waxyaabo kale waxaa loo yaqaanaa Beer (plantation). Beeraha lagu beero khudaarta iyo midhaha waxaa lagu magacaabaa Beer-midho (orchard).
Dhul baaxad balaadhan leh oo geedo badan iyo cows badan leh, kuwaas oo dabiici ama dad-beer ah, waxaa loo yaqanaanaa Keyn (forest). Sidoo kale, deegaanada fidsan ee buuruhu ku yar yihiin isla markaana leh cows badan iyo geedo talanteel ah waxaa lagu magacaabaa Dhuldaaqsiin (savanna).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhir&oldid=168799"